Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Tenin’olona miaro seza!
Inty sy nday: Tenin’olona miaro seza!
Nitarika famakafakana teo amin’ny mpanara-maso ny raharaha politika ny tenin’ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier teny amin’ny efi-trano filanonan’ny miaramila teny Soanierana ny sabotsy teo, nandritra ny fifampiarahaba sy fifampirarian-tsoa noho ny taona vaovao teo amin’ny fianakaviamben’ny tafika sy ny foloalindahy.
Navoitrany tamin’izany, ohatra, ny hoe “hamafisinay eto anivon’ny tafika fa tsy manaiky ary tsy mankasitraka ny mbola hidiran’ny firenentsika ao anatin’ny krizy izahay”. Nomarihiny tao anatin’izay ny hoe “ny fianakaviamben’ny tafika dia mihevitra fa tsy mendrika ny firenena Malagasy intsony ny hotantanin’olona tsy nivoaka avy amin’ny fifidianana izany”.
Re teny amin’ny teny niloaka ny vavan’ny tompon’andraikitry ny tafika ny adidy aman’andraikitry ny tafika, dia ny fiarovana ny firaisam-pirenena, ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany.
Mifanohitra amin’ny zava-misy eto izany, hoy ny manamboninahitra iray eo amin’ny laharan’ny jeneraly, izay isan’ny nanatrika an’io lanonana ara-miaramila tamin’ny sabotsy teo teny Soanierana io. Ity manamboninahitra jeneraly ity dia nilaza hoe “ satria minisitra ao anatin’ny fitondrana ny zoky Rasolofonirina Béni dia mahasahy miteny an’izany hoe “tsy mila krizy izany intsony”, fa ny vahoaka Malagasy nandritra izay fotoana lavabe izay ange ka niaina sy sempotry ny krizy nefa tsy re feo izy hoe tsy azo ekena intsony izao mianjady amin’ny vahoaka izao e!” Tsy tokony hadinoina, hoy ity manamboninahitra jeneraly nanakiana ny minisitry ny fiarovam-pirenena ity fa tsy maintsy manana havana sy fianakaviana maro miara-miaina amin’ny vahoaka sy isan’ny ianjadian’izao krizy lalim-paka mamono ny firenena izao ny minisitry ny fiarovana ka tsy mba reny na fantany ve izany fa ny tombontsoan-dry zalahy ao ambony ao ihany no arovany sy imasoany ny fanajariana azy isaky ny masoandro mihiratra?”
Manamboninahitra ambony iray eo amin’ny laharan’ny kapiteny koa dia nanipika fa “tsy izahay fianakaviamben’ny tafika no hosasana ati-doha amin’izany krizy politika tsy ilaina izany, ary efa manana ny lalan-kizoranay amin’izay tokony hanavotana ity firenena ity izahay, miaraka amin’ny manamboninahitra lefitra sy ireo vata-miaramila marobe, satria tsy fiarovan-tombontsoa amin’ny filazana fa tsy mankasitraka krizy politika no zava-dehibe aminay fa ny fanavotana izao tanindrazana izao mihitsy. Singa iray ao anatin’ny fahapotehan’ny firenena mantsy ny krizy politika, hoy ihany ity manamboninahitra ambony eo amin’ny laharan’ny kapiteny ity, fa ny vahoaka potiky ny fahantrana, ny toekarem-pirenena ravan’ny tsikombakomba maloto sy ny fivarotan-tanindrazan’ny tompon’andraiki-panjakana sasany, ny fandrobana ny harem-pirenena amin’ny endriny rehetra, ny tsy fisian’asa ho an’ny vahoaka maro, indrindra fa ny tanora, ny tsy fisian’ny fiarovana ny ho avin’ny tantsaha, ny tsy fisian’ny politika matotra hivelaran’ny sehatry ny fandraharahana ara-toekarena eto… sy ny maro tsy ho voatanisa dia endrika isehoan’ny krizy avokoa, ka nahoana no afantoky ny minisitry ny fiarovana any amin’ny resaka fiakarana eo amin’ny fitondrana ihany ny famaritana ny antsoina hoe krizy?
Raha izany no hevitra miseho lany dia azo atao ny manamarika fa diso fanambarana ihany izany ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier tamin’ny sabotsy satria ny hevitra marina no tsy fantany ary ny ironan’ny sain’ny maro eo anivon’ny fianakaviamben’ny tafika no iniany pempoina, satria miaro ny sezany izy.